Nei Tenga Alpha Labs TLB-150 Yako Workout Isu tese tingafarire kana kuzadzisa zvibodzwa mune yekurovedza yaive keke yekutengesa, uye pasina rubatsiro rwekuvaka muviri zvinowedzera. Zvinoita zvine musoro kuti tiwane chaicho kwechinguva sezvo isu tichida mashandiro ekusimudzira mashandiro akadai seAlpha Labs TLB-150 kuzadzisa zvinangwa zvedu zvemuviri. TLB-150 kana RAD-150 ndeimwe yemhando dzinopisa kwazvo munyika yezvinhu zvekuvaka muviri. Iko kushandiswa kweTLB-150 kunowanzo sangana nekuvandudzwa kwakakura mumatanho esimba, kumhanyisa, uye kutsungirira panguva yekukwirisa-kurovedza muviri uye zvikamu zvecardio. Chinhu chakanakisa ndechekuti vanofarira mafitness vanogona kutarisira ...
Laxogenin imushonga-unobva mushonga wakagadzirirwa kukura mhasuru uye kuchengetedza hutano hwakakwana. Icho chiri chekirasi ye brassinosteroids, ndiko kuti, steroid-sezvinhu zvinowedzera kukura kwezvirimwa. Izvo hazvikanganise iyo yemahomoni system. Chinhu chinoshanda che5a-hydroxy Laxogenin chakadzidzwa nemaJapan kubva muna 1960. Icho chimwe chezvemakwenzi ekuvaka muviri uye zvekusimbisa muviri zvisina mhedzisiro uye zvinogona kuiswa nevarume nevakadzi. Laxogenin chinhu chitsva chinogadzirwa muAmerican neEuropean indasitiri yemitambo. Yakachengeteka, isiri-mahormone, isiri-doping. Izvo zvivakwa, hongu, zvakawedzeredzwa, asi izvi hazvi ...
MaSARM anogona kutarisirwa sezvakangoita nyowani nyowani mune yekuvaka nyika, asi kutaura zvazviri, ivo akave akafundwa kuti agone kushandisa mumamiriro ezvinhu senge mhasuru yekuparadza chirwere kwenguva yakati. Vatambi vazhinji vakatora iyi ongororo ndokuishandisa kukwidziridza mashandiro kana kunatsiridza muviri wavo kuvandudza mashandiro munzvimbo inokwikwidza. MaSARM ekuwedzera anogona kuwana nzvimbo muchivakwa chemhasuru kana chirongwa chinopisa mafuta, uye mhedzisiro yacho inogona kutonyanya kushamisa kana ikasanganiswa nemazvo. Zvekudzoreredza kubva kuanabolic steroid kana prohormone kutenderera, yakave inozivikanwa kushandisa maSARM. Izvo zvinobatsira kuziva chii ...
Mamiriro Epamutemo EmaSARM MuUSA - Tenga maSARM Ari Kutengeswa Pave paine kugadzikana kwakakwana mupfungwa dzevanogadzira muviri kana zvasvika pamamiriro epamutemo emaSARM muUSA. Kuwanikwa kwe Selective Androgen Receptor Modulators (SARMs) chaive shanduko munyika yeanopokana-kuchembera uye nesainzi yekurapa. Nekudaro, iyi mishonga ine simba rakakurumidza kupinda mumatambudziko nemasangano ekuchengetedza mutemo nemamwe masangano nekuti kushandiswa kweiyi inovandudza mashandiro emishonga inopa mukana wakasiyana kune vashandisi. Izvi zvaingova zvimwe zvezvikonzero zvikuru zvikonzero nei zviremera zvakafunga kupedza zvikuru ...